အားလုံးဒီမှာအရောင် stretch ရုပ်ရှင်, ရောင်စုံလမ်းပိုင်းထုပ်
ဖေါ်ပြချက်:ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင်,အရောင် Stretch ထုပ်,အနက်ရောင်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်,အနက်ရောင်လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုး,အနက်ရောင်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်,အပြာရောင်လမ်းပိုင်းထုပ်
 Homeထုတ်ကုန်များဆန့်ရုပ်ရှင်ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင်
ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင် (Total 60 Products)
ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင်, အရောင် Stretch ထုပ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အနက်ရောင်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အနက်ရောင် pallet ထုပ်ပိုး 500mm
အနက်ရောင် pallet ထုပ် 25 micron
အနက်ရောင် pallet ကိုလမ်းပိုင်းထုပ်
ရောင်စုံ pallet လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးပြီး
ပလတ်စတစ်ရှင်းပြီးပျော့ပျောင်းသော LLDPE အရောင်လက်ကိုင်ဆန့်သည့်အဖုံး
ထုပ်ပိုးများအတွက်အရောင် Stretch ရုပ်ရှင် Pallet ထုပ်ပိုး
ပလပ်စတစ်လိပ်ရောင်စုံ Stretch Film အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်
PE အရောင် Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လက်ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်
လက်ကိုင်နှင့်အတူအနက်ရောင် mini ကိုထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်
ရောင်စုံ LLDPE pallet နှင့်စက္ဏူထူလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်
အစိမ်းရောင် LLDPE Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်သို့ကာစ်
ကောင်းသောအရည်အသွေးက Black အရောင် LLDPE Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
အပြာရောင်အရောင်စုတ်ခြစ်ခြစ်ရုပ်ရှင်လိပ် Translucent အပြာရောင် stretch film roll ကိုပစ္စည်းကိရိယာများမပါဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ကိုင်အထုပ်ပါသည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသော stretch film rolls သည်နှေးနှေးသည်။ ၁၅ မီလီမီတာမှ ၂၀...
အရောင်းရဆုံးအရောင်လက်ကိုင်ဆန့်ရုပ်ရှင် ထုတ်ကုန်အသွင်အပြင်များ: Bundling Stretch Film သည် Baby roll Stretch Film ဖြစ်သည်။ သင်သည်လျှောက်လွှာကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်အလွန်မြင့်မားသောကြိုတင်ဆန့်ရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုလျှင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။...
PE ထုပ်ပိုးများအတွက် stretch wrap ခြယ်သရုပ်ရှင် 1.The အရောင် stretch ရုပ်ရှင်အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်အပြာအနီရောင်နှင့်ဒါအရောင်အပေါ်ရှိပါတယ် အကျယ် ၅၀၀ မီလီမီတာကျယ်သောရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်အကျယ် ၅.၅ မီလီမီတာကျယ်ဝန်းသည်...
အရောင် pe ပလပ်စတစ်အပျော့လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးပြီးရုပ်ရှင် 1.The အရောင် stretch ရုပ်ရှင်အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်အပြာအနီရောင်နှင့်ဒါအရောင်အပေါ်ရှိပါတယ် 2. ပုံမှန်အားဖြင့်အကျယ် ၅၀၀ မီလီမီတာကျယ်သောရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်အကျယ်အ ၀ န်းရှိသည်...
နယူးစတိုင်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အပြာလမ်းပိုင်းလိပ်ရုပ်ရှင် ရောင်စုံလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင် pallet ထုပ်ပိုးများအတွက်စံပြသည်နှင့်အပိုဆောင်း security.It ပေးကောင်းသောဆန့ဂုဏ်သတ္တိများ,...
PE အရောင် Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လက်ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် ထုတ်ကုန်အမည် PE အရောင် Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လက်ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် အင်္ဂါရပ်များ: Excellent ကထိုးဖေါက်ခြင်း & မျက်ရည်ခုခံ အအေး, အပူမှရေ &...
Black က Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် pallet contents တွေကိုဖော်ထုတ်နှင့်အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးပေးဘို့အကာစံပြဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဒီလိုပါပဲဖြစ်ပြီးသူတို့သည်သင်၏ pallet ပေါ်မှာတစ်ချိန်ကဖော်ထုတ်ခံရမှသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရပ်တန့်မည်ကိုလုံခြုံရေး Pallet...
ရောင်စုံ LLDPE pallet နှင့်စက္ဏူထူလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင် feature & အားသာချက် > LLdpe လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဖြစ်ပါတယ် မြင့်မားတဲ့ဆန့ခွန်အား elongated, Self-ကော်နှင့်မြင့်မားသောင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အတူ;...
Black က LLDPE Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်သို့ကာစ်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ချုံ့ အစိမ်းရောင် LLDPE Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Cast ကိုလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ချုံ့ 1. ဒီသုံးခုအလွှာဘုံ extruding စက်ကထုတ်လုပ် Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (LLDPE Stretch...
ကောင်းသောအရည်အသွေးက Black အရောင် LLDPE Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Black က Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် pallet contents တွေကိုဖော်ထုတ်နှင့်အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးပေးဘို့အကာစံပြဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဒီလိုပါပဲဖြစ်ပြီးသူတို့သည်သင်၏ pallet...
တရုတ်နိုင်ငံ ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင် ပေးသွင်း
အဝါရောင်၊ အပြာ၊ အနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်များရှိသည်။ မြင့်မားသောအလင်းရောင်နှင့်အတူ,
ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံနိုင်သော၊ PE အရောင်ခြယ်ထားသောပစ္စည်းများအားသီးသန့်တည်ရှိမှုကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အချို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်စေသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ခွဲခြားရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးထားသောအလွှာထုပ်သည်အထူ ၁၀-၂၅ မိုက်ခရိုရှိပြီးအကျယ် ၄၀ မှ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ဆန့်အားသည် ၀.၆ မှ ၁.၈ ကီလိုဂရမ်၊ elongation သည် ၃၀၀% မှ ၄၅၀% ရှိသည်။ စိတ်ကြိုက် stretch ထုပ်ပိုးပြီးရုပ်ရှင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရောင်စုံ Stretch ရုပ်ရှင် အရောင် Stretch ထုပ် အနက်ရောင်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင် အနက်ရောင်လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုး အနက်ရောင်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင် အပြာရောင်လမ်းပိုင်းထုပ် အရောင်စုစည်း Stretch ရုပ်ရှင် ရောင်စုံ Pinted Stretch ရုပ်ရှင်ကား